Ifoni yeSurface ingaba neprosesa ye-Intel Kaby Lake Izindaba zamagajethi
Ifoni yeSurface ingaba neprosesa ye-Intel Kaby Lake
U-Ignacio Sala | | AmaSelula
Kudala sikhuluma ngamahemuhemu okuthi iMicrosoft ingaqala i-smartphone ngaphansi kwegama elithi Surface ukugcwalisa ithebhulethi / ilaptop yayo yeSurface Pro.Izikhathi eziningi, amahemuhemu awadluli lapho, amahemuhemu alula. Kodwa-ke, kwezinye izikhathi, amahemuhemu avame ukusinikeza imininingwane yangempela mayelana nedivayisi ukuthi inkampani yenkampani ekumemezelweni okufanayo. Isibonelo esicacile salokhu engikhuluma ngakho kungabonakala ekwethulweni kwe-iPhone 7, lapho iningi lamahemuhemu laqinisekiswa ngosuku i-Apple eyethula ngalo.
Namuhla sikhuluma ngeSurface Phone, i-terminal ebesikhuluma ngayo isikhathi esingaphezu konyaka futhi ngombono kulindeleke ukuthi kuphele lo nyaka noma ekuqaleni kuka-2017. Kwezinye izikhathi sikhulume ngokuthi kungenzeka ukuthi lesi siginali can suka ekusebenziseni amaprosesa we-ARM uye kulawo anezakhiwo ze-x86, okusobala ukuthi kuzoba maduzane kunalokho esikushoyo futhi asiwanaki amahemuhemu athi abafana baseRedmond bazoba nenhloso yokubheja iprosesa ye-Intel Kaby Lake.
Le processor izoba ne-GPU edidiyelwe, futhi izosinikeza ukusetshenziswa nokusebenza kuphakeme kakhulu kunalokho esingakuthola njengamanje ocingweni lweselula. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwama-processor lungasivumela ukuthi sisebenzise izinhlelo zedeskithophu ngqo kwi-smartphone yethu, umsebenzi ongenza i-Continumm ibaluleke kakhulu, esivumela ukuthi sixhume i-smartphone yethu kumonitha nakwikhibhodi futhi siyisebenzise sengathi iyi-PC.
Ubukhulu besikrini sale ndawo yokugcina bungaba bukhulu, bube phakathi kwama-intshi angu-5,5 no-6 ngesinqumo samaphikseli angama-2.560.1.440. Amakhamera wedivayisi nawo angaba yinto yokugqamisa ku-terminal eno-21 mpx engemuva no-8 mpx ngaphambili, izinqumo ezidlula lokho abakhiqizi abakhulu abavamise ukukusebenzisa yocingo lweselula, lapho banqume khona ukunciphisa isinqumo sokukhetha ukwenza ngcono ikhwalithi yezinzwa zabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ifoni yeSurface ingaba neprosesa ye-Intel Kaby Lake
Abakwa-Samsung banamalungelo okuloba isikhulumi seNothi
I-Google Home izoshibha kune-Amazon Echo